संसार घुमाउने ७ फिल्म :: Setopati
संसार घुमाउने ७ फिल्म
अर्जुन ढकाल असोज १७
'इट प्रे लभ' फिल्मको दृश्य
दसैं आउन लाग्यो। यो समय धेरै नेपालीहरू घुम्न र आफन्तहरू भेट्न जाने समय हो। रमाइलो मौसम र बिदा हुने भएकाले देशभित्रै र विदेश पनि घुम्न जाने चलन बढेको छ।
तर यसपटक अवस्था अलि फरक छ। कोरोना महामारीका कारण यो वर्ष खासै घुमघाम गर्न सकिँदैन। लामो समयदेखि हाम्रा यात्रा रोकिएका छन्। दसैंमा पनि सायद घुम्ने अवस्था हुँदैन।
घुम्ने मात्रै होइन, कामकै सिलसिलामा हिँड्न मिल्ने अवस्था छैन। घरै बस्नुपरेको यो बेला विगतमा बनेका केही फिल्मले हामीलाई संसारका धेरै ठाउँमा पुर्‍याएर न्यास्रो मेटाइ दिन सक्छन्।
हुन त नेसनल जोग्रफी, एनिमल प्लानेट वा अरू थुप्रै टिभी च्यानलका कार्यक्रमले ‍पनि संसार घुमाइदिन्छन्। यसबाहेक संसार बुझ्न र हेर्न अनलाइन र युट्युबमा थुप्रै सामग्री पाइन्छन्। अझ वृत्तचित्रमा त विषयवस्तुलाई गहिरो अनुसन्धान गरी गम्भीर रूपमा प्रस्तुत गरिएको हुन्छ।
तर यिनमा देखाइने वृत्तचित्र हेर्न तब मज्जा आउँछ जब तपाईंसँग त्यस्ता कार्यक्रम बुझ्न आधारभूत सूचना र ज्ञान र रूचि हुन्छ। नत्र त्यति रोचक नलाग्न सक्छ।
यस्ता वृत्तचित्रमा धेरै जटिल प्रश्नहरू पनि उठाइएको हुन्छ। यी प्रश्नले पक्कै पनि हाम्रो दिमाग हल्लाउनुका साथै मानसिक बोझ पनि थप्न सक्छन्।
त्यसैले यो महामारीमा टाउकोमा भारी नबोकाई संसार देखाउने केही सिनेमा तल उल्लेख गरिएका छन्। यी सिनेमाले कथा भन्दै प्रकृति र संस्कृति देखाउँछन्।
हुन त मान्छेको रूचिअनुसार छनौट फरक हुन्छन् नै। मलाई मनपरेका यी सिनेमा सबैलाई मन नपर्न सक्छ।
र एउटा जटिलता, यहाँ उल्लेखित सिनेमा युट्युबमा यसै हेर्न नपाईन सक्छन्। यसका लागि नेट्फिल्क्स, हुलु वा अमेजन जस्ता अनलाइन प्लेटफर्म वा सिडी खोजेर हेर्न सकिन्छ।
१. अ ब्युटिफूल प्लानेट (A Beautiful Planet)
दुई साताअघिको न्यु साइन्टिस्ट पत्रिकाका अनुसार हाल संसारमा जम्माजम्मी ५५० जना अन्तरिक्ष यात्री छन्। तीमध्ये एक हुन्, ईरानी मूलकी अमेरिकी अन्तरिक्ष यात्री अनुसेह अन्सारी। उनी निजी खर्चमा अन्तरिक्ष यात्रीका रूपमा स्पेश स्टेशन पुग्ने ४ जनामध्ये एक हुन्।
उनले केही हप्ताअगाडिको न्यु साइन्टिस्ट पत्रिकालाई भनेकी छन्, 'यहाँ त हामी विभिन्न रूपमा बाँडिएका छौं। सीमाहरूले छुट्टाइएका छौं। फरक बनाइएका छौं। तर त्यहाँ (स्पेश स्टेशन) बाट हेर्दा अँध्यारो अन्तरिक्षमा यो हाम्रो जीवन्त पृथ्वीको साह्रै माया लाग्छ। मैले जस्तै सबैले हेर्न पाउने हो भने मान्छेको बुझाइ नै फरक पर्छ।'
उनले भनेजस्तो सबैले अन्तरिक्ष पुगेर हेर्ने सम्भ्व त छैन। तर यो सुन्दर पृथ्वीलाई अन्तरिक्षबाट हेरेको थोरै महसुश गर्न नासाले बनाएको करिब ४९ मिनेटको 'अ ब्युटिफूल प्लानेट' एउटा सुन्दर डकुमेन्ट्री हो।
तीन जना अन्तरिक्ष यात्रीले आफ्नो यात्राको वर्णन गर्दै स्पेश स्टेशनको झ्यालबाट यो पृथ्वी देखाउँछन्। उनीहरूको छ महिना लामो बसाइका बेला उच्च क्षमताको क्यामरामा कैद गरिएका दृश्य लोभ लाग्दा छन्।
कोलोराडोका पहाड, अमेजनको जंगल, अफ्रिकाको मरूभूमि, यूरोपको एल्प्स पहाड हुँदै, भारत र पाकिस्तानबीच सीमामा काँडे तारसँगै बलेका बत्तीका लहर, हाम्रा सेताम्मे हिम शृंखला हुँदै झिलिमिली दक्षिण कोरिया र अँध्यारो उत्तर कोरिया हेर्न पाइन्छ।
पृथ्वी सतहदेखि करिब ४०८ किलोमिटर माथि रहेको स्टेशनबाट पृथ्वीमा हुने रात र दिनको चक्र, बेलाबेला चल्ने हुरिकेन (चक्रवात), आँधीसँग चम्किरहेका चट्याङहरू लगायत अनौठा दृश्य पनि देख्न सकिन्छ।
त्यो क्यामराले सिंगो पृथ्वी, आकाशगंगा र अन्तरिक्ष पनि देखाउँछ। अनि अन्तरिक्षयात्रीहरू स्टेशनमा कसरी बस्छन्, हिँड्छन्, नुहाँउछन्, कफी कसरी बनाउँछन्, कसरत कसरी गर्छन्, उनीहरूको खानेकुरा स्पेश ट्रकबाट कसरी आइपुग्छ भन्ने कुरा पनि हेर्न पाइन्छ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, यो स्पेश स्टेशन १६ वटा देश मिलेर बनाइएको विज्ञानको अद्भूत नमूना हो। फरक फरक भाषा बोल्ने फरक देशका मान्छे पालैपालो गएर काम गरेर फर्कन्छन्।
हुन त अन्तरिक्ष सम्बन्धी अरू राम्रा सिनेमा पनि छन्, जस्तै- ग्राभिटी, एपोलो १३, फस्ट म्यान, अराइभल। तर यो सिनेमाले भने अन्तरिक्षभन्दा पनि अन्तरिक्षबाट देखिने पृथ्वी देखाउँछ।
यो सिनेमा हेरिसकेपछि तपाईंलाई पक्कै पनि फरक अनुभव हुन्छ र यो पृथ्वीको थप माया गर्न थाल्नुहुन्छ। सबै मानिस आफन्त लाग्छन र पृथ्वीमा हुनुको न्यानो अनुभव हुन्छ।
२. द बकेट लिस्ट (The Bucket List)
'अ ब्युटिफूल प्लानेट' हेरेपछि हलिउड सिनेमा 'द बकेट लिस्ट' हेर्न थप रमाइलो हुन्छ।
निको नहुने रोगबाट पीडित दुई जना वृद्धको अस्पतालमा भेट हुन्छ र साथी बन्छन्। अनि उनीहरू मर्नुअगाडि गर्न चाहेका कुराहरूको सूची बनाउँछन् र घुम्न योजना गर्छन्।
सिनेमामा उनीहरू स्काइ-डाइभिङ गर्छन्। उत्तरी ध्रुवको आकाशमाथि उडछन्, फ्रान्सको प्रसिद्ध ला सेभेर दोमा डिनर खान जान्छन्। ताज महल घुम्छन्, ग्रेटवालमा मोटरसाइकल दौडाउँछन्। तान्जानियामा जंगल सफारी जान्छन् अनि एभरेस्ट ट्रेकिङका लागि नेपाल आइपुग्छन्।
कथाअनुसार नै यो एउटै फिल्म हेरेर तपाईंले फ्रान्सको भव्य होटल, अफ्रिकाको सफारी, इजिप्टको गिजा पिरामिड, चीनको ग्रेटवाल, एभरेस्ट ट्रेकिङ, उत्तरी ध्रुव सबै देख्न सक्नुहुनेछ।
यो सिनेमा हेर्दा यो जिन्दगी फेरिफेरि पाइँदैन, त्यसैले जे सकिन्छ बाँचुञ्जेलमै गर्नुपर्छ भन्ने गज्जबको अनुभूति पनि हुन्छ।
३. द मोटरसाइकल डायरिज (The Motorcycle Diaries)
'द बकेट लिस्ट' हेरेपछि हेर्न सकिने अर्को सिनेमा हो, 'द मोटरसाइकल डायरिज'।
हुन त स्पेनी र पोर्चुगाली भाषामा बनेका थुप्रै राम्रा फिल्म छन्। तर धेरै दुःख नगरी दक्षिण अमेरिका घुमाउने सिनेमा भने 'द मोटरसाइकल डायरिज' नै हो।
चे ग्वाभाराको जीवनीमा आधारित यो सिनेमाको मूल विषय राजनीति हो। तर स्पेनि भाषामा बनेको यो सिनेमाले दक्षिण अमेरिकी देशहरूको गज्जब यात्रा गराउँछ। दक्षिण अमेरिकाका प्रसिद्ध ठाउँ मचापिच्चु, नहुलहफी ताल, एटाकामा मरुभूमि, पाटागोनिया, भेनेजुएला, काराकस, व्युनर्सआयर अर्जिन्टिना र मिरामर समेत घुमाउँछ।
४. द बिच (The Beach)
धेरै नेपालीको गन्तव्य हो थाइल्यान्ड, त्यसमा पनि पताया बिच र फुकेट। यो सिनेमा प्रसिद्ध काब्रीको फिफी लेहको माया बेमा छायांकन गरिएको छ।
करिब २० वर्षअघिका जवान लियोनार्दो डिकाप्रियोले माछा पौडेको पनि देखिने कञ्चन र शान्त 'माया बे' मा मस्ती गरेका छन्, थरीथरीका सामुद्रिक खेल खेलेर। यो सिनेमा हेरेपछि तपाईंलाई माया बे जान मन लाग्नेछ। यो बिच संसारकै रोमाञ्चक सामुद्रिक तटमा पर्छ।
भनिन्छ, यही फिल्मका कारण यहाँ पर्यटकको भिड थामिनसक्नु भयो। सन् २०१८ देखि थाई सरकारले पर्यटकका लागि यो बिच बन्द गरेको छ। सन् २०२१ मा फेरि खुल्ने भनिएको यो बिच कहिले खुल्ला भनेर संसारभरका पर्यटक कुरिरहेका छन्।
५. सेभेन इयर्स इन टिबेट (7 years in Tibet)
'माया बे' को बिच हेरेपछि हेर्न रमाइलो हुने अर्को सिनेमा हो - सेभेन इयर्स इन टिबेट।
अष्ट्रियन पर्वतारोही हेनरी हरेरको जीवनीमा आधारित यो सिनेमाले करिब ८० वर्षअगाडि चीनले लिनुभन्दा पहिलाको तिब्बतको कथा भन्छ।
हेनरी सन् १९३८ मा नाङ्गा पर्वत चढ्न भनेर अष्ट्रियाबाट भारतको देहरादून आइपुग्छन्। द्रोश्रो विश्व युद्ध सुरू हुनु ठीकअगाडि भएकाले उनलाई जासुस ठानेर जेलमा राखिन्छ। सन् १९४४ मा छुटेपछि उनी तिब्बततिर लाग्छन् र ल्हासा पुगेर दलाई लामालाई पढाउन थाल्छन्। पछि तिब्बतलाई चीनले लिएपछि उनी अष्ट्रिया नै फर्किन्छन्।
यो फिल्ममा दृश्यावलोक गर्दै करिब ७० वर्षअगाडिको हिमाली क्षेत्रको इतिहास पनि हेर्न पाइन्छ। रमाइलो के भने, उनी जेलबाट छुटेपछि तिब्बत जाँदै गर्दा पहाडी भेगको चिया बगानमा त्यहाँका सुरक्षाकर्मीबाट लखेटिन्छन्। त्यहीबेला यसमा केही नेपाली संवाद पनि छन्। तर सायद यो दृश्य नेपालको नभई आसामतिरको हुन सक्छ।
यो सिनेमामा तिब्बत र भारतका दृश्य भनिए पनि केही दृश्य अर्जेन्टिना, क्यानडा, चिली लगायत ठाउँमा पनि खिचिएको हो।
६. ट्रयाक्स (Tracks)
तिब्बतका हिमाली भेग हेरेपछि अब मरूभूमितिर लागौं। मरूभूमिको कथामा बनेका राम्रा सिनेमा धेरै छन्।
तीमध्ये, अष्ट्रेलियन लेखक रोबिन डेभिडसनको सम्झनामा आधारित फिल्म 'ट्रयाक्स'ले उनले करिब नौ महिना लगाएर अष्ट्रेलियन मरूभूमिको एक्लै गरेको यात्रा वर्णन छ।
ऊँट चढेर गरिएको करिब २७०० किलोमिटर यात्रा वर्णनमा मरूभूमि, त्यहाँको जीवन र संघर्षबारे देख्न पाइन्छ। यो सिनेमा मूलतः उत्तरी अष्ट्रेलिया र त्यहाँको मरूभूमिमा यो छायांकन गरिएको छ।
७. इट प्रे लभ (Eat Pray Love)
सिनेमाको नामजस्तै यसले कहिले इटालीको नाभोना पिज्जा त कहिले भारतको जोगीको आश्रम र कहिले बाली (इन्डोनेसिया) को धारन खेत घुमाउँछ। प्रेम र आध्यात्मको कथामा बुनिएको यो फिल्मले युरोप र एसिया घुमाउँदै मनोरञ्जन दिन्छ।
यो सिनेमामा कथाजस्तै इटाली, भारत र इन्डोनेसियामा छायांकन गरिएको छ।
लेखक अर्जुन ढकाल
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज १६, २०७७, २०:४१:००